Ministerii Haajaa Alaa Amerikaa,Joon Keerii Imaltuu Guyyaa Jahaatiif Afrikaatti Dabree Hardha Itoophiyaa Gahe
Ebla 30, 2014
Johan Kerry fi Tedros Adhanom
WASHINGTON,DC — ​Keeriin yoo imaltuu guyyaa jahaatiif Afrikaatti dabre kana Itoophiyaatti goree rakkoolee Suudan Kibbaa,biyya Afrikaa Waaltaa (CAR)hariyummaa Amerikaan Afrikaa waliin qabdu, akka nagaa fi demokiraasiin naannootti baballatu fi waan heddu irratti mari’atan.
Ministeri kun marii tana keessatti akka bulchootii Suudan Kibbaa siyaasaa irratti wal dhabanii namii waraanaa walti baafatee dhibbii hedduun dhumatee miliyoona tokkoo baqachiise fala argatu mari’achiisa.
Joon Keerii yoo Itoophiyaa gahetti muummee ministera Itoophiyaa Hayilee Maariyam Dessaalenyi,ministera haajaa alaa Itoophiyaa Dr.Tewodiroos Adihaanom walilleen nagaa fi demokiraasii irratti,hariyummaa biyya lamaanii irratti wal mari’atan.
Tana maleellee akka demokiraasiin jabaattee mirgii namaa eegamu ergaa dabarsuu nama biyyaatii fi waldoota dargaggoota biyya akka akkaatiin wal mari’ata.
Tana maleellee himaammata Amerikaan Afrikaa irratti qabdu irralleetti akkanuma wal mari’atan.
Manni Murtii Dhimmi Jawaarfaa Bakka’saan Hin Jirretti Akka’laalamu Murteesse
Lolli Addi Bilisummaa Uummata Tigraay Geggeessu Naannoree Birootti Babal’achuun Yaaddoo Uume Jedhu Xiinxaltoonni
Lola Naannoo Affaar Irratti Ibsii Kenname
Itiyoopiyaa Keessaa Fixiinsa Sanyii Ittisuu Irratti Ibsa Tokkummaa Mootummootaa Biraa Kenname
Prezidaantonni Bulchiinsa Naanoo Somaalee fi Kan Oromiyaa Haala Itiyoophiyaa Kaabaa Irratti Yaada Kennan
Manni Murtii Olaanaa Federaalaa Ajjeechaa Haacaaluun Warra Himatamanirratti Murtee Dabarse
Aanaa Baloo Jagamfooyii Keessa Lolli Jiraachuu Dubbata, Koomishiniin Poolisii Benishaangul Gumuz
Reeffi Namaa Laga Daangaa Itiyoopiyaa fi Sudaan Jiru Keessaa Argame
Kutaan Sudaan Kibbaa balaa roobaatiin rukutame
Keeniyaan namoota 1600 lammummaa kenite